विप्लवको गैरराजनीतिक र अतिवादी गतिविधिविरुद्ध सरकार कडा हुन्छ : गृहमन्त्री थापा
२o७४ चैत २४ शनिबार
चितवन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको माओवादीले गरिरहेका क्रियाकलापलाई अतिवादी भन्दै त्यसका विरुद्ध सरकार कडा भएर लाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रेस सेन्टर र प्रेस चौतारीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विप्लवका क्रियाकलाप राजनीतिक नभइ ध्वंसात्मक भएको बताए । उनले भने–“शान्ति, स्थायित्वको विरुद्ध अतिवादी अराजकतातिर लैजान खोजिदैछ त्यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन ।” विप्लव नेतृत्वको माओवादीले संविधान र कानून विरोधी गतिविधि गरिरहेको भन्दै उनले यो गैरराजनीतिक गतिविधि सरकारले रोक्ने दृढता व्यक्त गरे ।
उनले भने–“यो राजनीतिक गतिविधि मानिदैन, गैरराजनीतिक गतिविधि हो । गृहमन्त्रालयले केही दिनअघि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि देशमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले वैशाखको दोस्रो सातासम्ममा दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक हुने भन्दै यसले विश्वका सबै अग्रगामी शक्तिलाई प्रेरणा दिने विचार व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री थापाले अब प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा कुनै विवाद नआउने भन्दै नियमसंगत र वैज्ञानिक ढंगले काम हुने बताए ।
निर्मला हत्या प्रकरणमा थप ५ प्रहरी निलम्बित, समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझायो
काठमाडौँ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्याको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष पेश गरिएको छ । हत्या र त्यसपछि विकसित घटनाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश
गगन थापाको संसदमा प्रश्न - कार्यक्षमता र सोचमा ‘बादल’ लागेको गृहमन्त्री हामीलाई चाहिन्छ र ?
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्य क्षमता कमजोर रहेको आरोप लगाएका छन् । संसद बैठकमा बोल्दै, 'ठुलो माछालाइ पक्रिन सक्नु भएन, हामि बोलेनौ, डा.भोराज
संसदमा गृहमन्त्री : प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधिनँ, प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आयो, शक्तिशाली मानिस ठूलै जिउडालका रहेछन्
काठमाडौं । निर्मला हत्याबारे जवाफ दिन संसदमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले बम दिदीबहिनीबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा
गगनको गृहमन्त्रीलाई प्रश्न -छानबिनलाई प्रभावित हुने विचार राख्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्नुभयो ?
काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले निर्मलाको हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष छानिबनमा प्रधानमन्त्रीले प्रभाव पारेको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रश्न गरेका छन्। गगन थापाले भने, 'निर्मल हत्या प्रकरणमा दुई